MOS-P3: Sahaminta isha weyn ee sii kordheysa ee Microsoft Open Source - Qeybta 3 | Laga soo bilaabo Linux
MOS-P3: Sahaminta weyn ee sii kordheysa ee Microsoft Open Source - Qeybta 3
Iyada oo tan qaybta saddexaad laga soo bilaabo taxanaha maqaalada "Microsoft Il furan " Waxaan sii wadeynaa sahaminta aan ku hayno buugaagta sii kordheysa ee sii kordheysa ee codsiyada furan soo saaray Giant teknoolojiyad de «Microsoft ».
Halka, si loo baadho Qaybaha hore ee la xiriira taxanahan, waxaad gujin kartaa xiriirka soo socda:
MOS-P2: Sahaminta weyn ee sii kordheysa ee Microsoft Open Source - Qeybta 2
1 MOS-P3: Microsoft Open Source - Qaybta 3
1.1.2 Baahinta & iskaashiga AI on Blockchain
MOS-P3: Microsoft Open Source - Qaybta 3
Del "Microsoft Open Source" Kuwani waa barnaamijyada soo socda ee ku jira liiska ee ay tahay inaad sii wadato sahaminta:
"Waqti la qaadan karo oo la qaadi karo, oo dhacdo-waddo ah oo loogu talagalay in lagu sameeyo microservices daruuraha iyo geeska."
“Dapr wuxuu ka caawiyaa horumariyeyaasha inay dhisaan adkaysi iyo dhacdooyinka barnaamijyada baahsan loo qaybiyo. Hadday ahaan lahayd guriga dhexdiisa, daruurta dhexdeeda, ama aaladda agteeda, Dapr waxay kaa caawineysaa inaad wax ka qabato caqabadaha ku yimaada dhismaha qalabka wax lagu kiciyo oo uu ilaaliyo barnaamijkaaga agnostic code.
Nota: Macluumaad faahfaahsan oo waxtar leh waxaa si toos ah looga heli karaa waxyaabaha soo socda xiriiriye: Waraaqaha Darp y GitHub.
Baahinta & iskaashiga AI on Blockchain
“Baahinta & iskaashiga AI ee Blockchain waa qaab loo abuuray martigelinta iyo tababarida moodooyinka wax lagu barto mashiinka ee sida guud loo heli karo. Fikrad ahaan, adeegsiga fikrad socosho adoo adeegsanaya moodal ku kaydsan qandaraas caqli gal ah waa bilaash. "
Inta uu bogga rasmiga ah ee GitHub ku dar waxyaabaha soo socda dusheeda, sida soo socota:
"Xilligan Baahinta iyo wada shaqeynta Sirdoonka Artificial on Blockchain (baahinta & iskaashiga AI ee Blockchain) waxaa loo beddelay Barnaamijka Qaabeynta Cusboonaysiinta Qaababka ee Blockchain. on Blockchain). Taas oo ujeedadeedu tahay inay martigeliso oo ay tababarto moodeellada wax lagu barto ee mashiinnada la heli karo.
".NET waa isha furan ee Microsoft, qaab dhismeedka guud ee ujeedada guud ee dhismaha codsiyada iskutallaabta."
".NET waxay isticmaali kartaa luuqado badan, tafatirayaal, iyo maktabado si ay u dhisto barnaamijyo iyo ciyaaro labadaba webka, mobilada, desktop-ka, iyo Internetka Waxyaabaha (IoT)."
.NET iyo ML.NET: Microsoft Platform Source Source
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" sahamintan saddexaad ee «Microsoft Open Source», waxay bixisaa barnaamijyo xiiso leh oo kaladuwan oo barnaamijyo furan ah oo ay soo saartay Giant Teknolojiyada ee «Amazon»; waana mid dan iyo faa iido weyn u leh, dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » MOS-P3: Sahaminta weyn ee sii kordheysa ee Microsoft Open Source - Qeybta 3
Proxmox Mail Gateway 6.4 waxay la timid cusbooneysiin, isdhexgalid Proxmox Backup iyo inbadan
Google wuxuu soosaarayaa Qalab Cusub oo Bluetooth ah oo loogu talagalay Android, oo lagu qoray miridhku